PangeaDay: Ireo Lahatsary Hanovàna Izao Tontolo Izao Rehefa 10 May · Global Voices teny Malagasy
Tanjona tokana : hahafantarana ny hafa ary hifantoka amin'izay itoviana.
Voadika ny 02 Avrily 2019 8:28 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Shqip, বাংলা, 日本語, Español, македонски, Deutsch, English
(Fanamarihana: Lahatsotratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2008)
Ny 10 may 2008 tamin'ny 6ora hariva, ora GMT, sarimihetsika miisa 24 no nalefa nandritra ny hetsika iray naharitra ora 4. Izay mampiavaka azy, ity hetsika PangeaDay ity dia handefa avy any amin'ny faritra enina, ary amin'ny fiteny fito samihafa manerana an'izao tontolo izao sady ho hita avy amin'ny Aterineto, ny fahitalavitra na ireo finday, ka tokana ny tanjona : hahafantaran'ny tsirairay ny fiainan'ny hafa ary hifantoka amin'izay mampitovy antsika, fa tsy amin'izay mampiavaka antsika ary hahafahantsika miara-miasa ho an'ny fandriampahalemana. Avy amin'ny fanirian'ilay Ejiptiana iray mpanao sarimihetsika, Jehane Noujaim, ity fandraisana anadraikitra ity. Noho izy nahazo ny loka TED, nomena fankasitrahana koa izy ho fanampin'ny loka 100 000 Dolara. Faniriany ny PangeaDay, hanovàna ny tontolo sy hanorenana andro iray hahafahan'ireo mponina erantany hihaona amin'ny alalan'ny sarimihetsika. Afaka jerena eto ny lahateny fankasitrahany tamin'ny 2006.
Koa satria tanjon'ny PangeaDay ny hitondra ny olona mba hivondrona, fanasàna natao ho an'ireo mpanatrika azy io ny mba hampakatra ny lahatsary manokana avy amin-dry zareo eo amin'ny fantsona lahatsary PangeaDay, toerana izay mety ahitanao an'ireo lahatsarin'ny mponina 1037, nalefa ho setrin'izany.
Mba ho ohatra, miresaka mpianatra iray momba ny Haikanto ao Tanzania ny iray amin'ireo lahatsary nakarina, mitantara ny fiainany andavanandro sy manazava ny fomba tiany hampianarana zavakanto an'ireo ankizy tsy manan-kialofana. Ity manaraka ity, ny tantaran'i Chado avy amin'i jamesstephenbrown:
Mampivanàka ny fitantanana ny PangeaDay: avy ao Kairo, ao Kigali, ao Londona, ao Los Angeles, ao Mumbai ary ao Rio de Janeiro, ireo sarimihetsika, ny mozika mivantana ary ireo mpandray fitenenana dia hiara-hientana mba hanome aingam-panahy an'izao tontolo izao. Nofantenana tao anatin'ireo sarimihetsika maherin'ny 25 000 avy amin'ireo firenena maherin'ny 100 ireo sarimihetsika nofidiana. Mizara an'ireo toetra sasantsasany maha-izy azy rehetra ireo sarimihetsika ireo, sahala amin'ny fahafahana manainga fanahy, manova sy ahafahantsika miaina ny fiainana amin'ny alàlan'ny fijerin'ny hafa. Ho iray amin'ireo mpandray anjara ny Queen Noor of Jordan, eo ankilan'ny mpanao mozika sy ny mpikatroka Bob Geldorf, Christiane Amanpour avy amin'ny CNN ary ny Hypernova, tarika Iraniana mpanao rock . Rehefa tonga any amin'ireny toerana ireny, hihaona ireo olona ireo, na aiza na aiza eto an-tany, samy ho afaka ny hisoratra anarana sy hampiseho daholo ireo vondrona sy namana hoe tsy ho tara amin'ny fanarahana izy ireo: afaka manatrika ny zava-misy avy ao an-tanananao ianao na koa manomana ny anareo manokana.
Na izany aza anefa, tsy natao hihaonana fotsiny mandritra ny ora 4 ny PangeaDay. Ny hevitra fonosin'ilay hetsika dia hoe mba hahatonga ny olona hanana aingampanahy, miresaka ary mitondra fiovàna. Mety hahafahan'ireo hafa handray anjara ihany koa izy io, fa tsy amin'ny maha mpitazana fotsiny. Tamin'ny alàlan'ny Nokia, fikambanana mpiara-miasa, notoloran'ireo mpamokatra sarimihetsika tany amin'ny faritra maro isankarazany teto amin'izao tontolo izao fitaovana azo entina mandehandeha ahafahana mandrakitra lahatsary ireo mponina sasany tany amin'ny faritra ambanivohitra, ireo toby fialofana sy ireo sekoly fianarana sarimihetsika, mba hahafahan'izy ireo mandrakitra ny tantaran-dry zareo. Afaka mampakatra ireo lahatsariny manokana ihany koa ny olona raha te-hitspa vintana hahazo ilay finday Nokia N95 8GB. Ity fiarahamiasa ity dia mitondra antsika hitafa amina Myanmar iray mpialokaloka ao India, mandrakitra ny hehin'ireo ankizy, fianakaviana Iraniana iray ao anaty toby fialokalofana ao Afganistana, mandrakitra ny heviny momba ny Hope (Fanantenana), ary Indiana iray ao Bangalore maka sary ny fikapàna ireo hazo ao Banyan… sy ireo ankizy mamboly zanakazo vaovao.
Araka izany, misy marobe ireo fomba samihafa handraisana anjara. Aza avela handalo fotsiny ny vintana ahafahana mandray anjara amin'io ary kendreho ny mba hilaza amin'ny hafa sy hanely ny feo.